त्यस्तै साउन महिनामा महिला ब्रतालुहरुको भीड पशुपतिनाथ मन्दिरमा उत्तिकै देखियो । स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ता गर्दै ब्रतालुहरु पशुपतिनाथमा जम्मा भएका थिए । नेपालमा साउन महिना लागेसँगै चाडपर्वको आगमन सुरु हुन्छ ।
चाडपर्व लागेसँगै स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ता गर्ने पनि यत्तिकै हुन्छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएसँगै कोभिडको नँया भेरियन्ट देखापर्छ । धमाधम चाडपर्व आइरहेको छन् । चाडपर्वसँगै संक्रमण दर बढ्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । देशभर कति जिल्लामा अझै पनि निषेधाज्ञा जारी नै छ । उपत्यकामा सिडियो कार्यालय निषेधाज्ञा जारी नै छ भन्दै सूचना निकालेको छ । तर, कसैले टेरेको भने होइन् ।
सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित उपत्यकाका तीन जिल्लाका सर्वसाधारणलाई देखिएको छ । देशभरको सक्रिय संक्रमित मध्ये उपत्यकामा मात्र झन्डै एकतिहाइ रहेको छ । उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा नाममा मात्र बाँकी रहेको छ । जहाँ हेप्यो मानिसहरुको भीड यत्तिकै छ । मुखमा मास्क छैन् । सामाजिक दूरीको पालना गरिएको छैन् । हवाईजहाजदेखि लिएर बाटोमा गुड्ने सवारी साधनले समेत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छैन् ।
तैपनि अनुगमन कतै पनि गरेका छैनन् । निषेधाज्ञा झनै कडा गर्दै लानुपर्ने ठाँउमा कोरोना संक्रमण बढाउनको लागि सिडियोहरुले खुला छोडिदिएको छ । भोलि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?
अस्पतालमा बेड नभएर भुँइमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने दिन आँउछ । उपचार नपाएर कतिले कोरोनाकै कारण सार त्याग्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यतिखेर राज्यले के गर्छ । एउटा नागरिक बनाउनको लागि सरकारको कति लगानी छ । एउटा नागरिक गुमाउँदा राज्यलाई कति घाटा हुन्छ ।
अस्पतालमा हेप्यो सर्वसाधारणको चाप यत्तिकै छ । खोप लाउने ठाँउमा पनि मानिसहरुको घुइँचो छ । यातायात कार्यालय, मालपोत, बैंकफाइनेन्स, होटलहरुमा पनि मानिसहरु भीड उत्तिकै देखिन्छ । देशकै जेठो अस्पतालल भनेर चिनिने वीर अस्पतालमा सेवाग्राहीको भीडले गर्दा खुट्टा टेक्ने ठाँउ छैन् ।
को कोरोनाको बिरामी, को अरु कुनै रोगी भनेर चिन्नै मुश्किल छ । सबैजना एकैठाँउमा कुनै सभामा भेला भएर बसेजस्तो देखिन्छ । देशकै जेठो अस्पताल वीरमा त कोरोनाको पीर छ भने अरु अस्पतालको हालबारे सोचौं ।
वीर अस्पतालको टिकट काट्नेहरुको अव्यस्थित लाइनले कतिको मनस्थितिमा कोरोना हराइसकेको हो र ? भन्ने प्रश्न पैदा हुन्छ ।
सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन हुने वीर अस्पतालमा कोरोनालाई लिएर चरम लापरबाही गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । वीर अस्पतालमै मात्र होइन् । सिभिल अस्पताल तथा अन्य सरकारी र निजी अस्पतालमा सेवाग्राहीहरुको भीडभाड उत्तिकै देखिन्छ ।
कोरोनाको कारण दिनहुजसो मृत्यु हुनेको दर बढ्दो छ । यसरी दैनिक कोरोनाको कारण मानिसहरुले ज्यान गुमाउदा राज्यले निकै ठूलो क्षति पुप्याउनुपरेको छ । एउटा नेपाली आमाको कोखबाट बच्चा जन्मिन्छ । त्यो बच्चा हुर्काउनलाई उसको परिवारको कति लगानी भएको हुन्छ ।
परिवारको मात्र नभएर राज्यको पनि लगानी हुन्छ । ऊ ठूलो हृन्छ । राज्य र आफ्नो परिवारको लागि केही गर्छ भन्ने आशा बोकेको धेरै हून्छन् । तर कोरोनासँगै उसको परिवारले पनि त्यो आश गुमाउनुपर्छ । राज्यलाई कर तिर्ने एउटा नागरिकमा कमी हुन्छ ।
फेरि अर्को जन्मेको बच्चाबाट कर पाउन त राज्यले बर्षो कुर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना लागेको एउटा व्यक्ति उपचार गर्न राज्यको ढुकुटीबाट कति राजश्व खर्च भएको छ । एउटा नागरिकको उपचारमा राज्यले कति लगानी गर्नुपरेको छ । किन कि राज्यको सबैभन्दा प्रथम दायित्व भनेको आफ्नो देशको जनताको बाच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।
राजनितिक दलहरुलाई त कोरोना आएको दशै आएजत्तिकै भएको छ । सभा, भेला, पुजापाठ, संस्था खोल्दै हिडेको छन् । विश्वभर कोरोना फैलिएको छ । सबै राष्ट्रले आफ्नो देशको नागरिक बचाउन विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएको छन् । नेपालका नेताहरु कार्यक्रम भ्रमण गर्दै ताली बजाउदै हिडेको छन् ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेमा सर्वप्रथम नेताहरुलाई नै लिनुपर्छ । यसको सिधा अवसरचाँहि व्यापारीहरुले लिएको छन् । नेताहरुले जे गरेपनि केही नहुने रहेछ । उनीहरुले भीडभाड गर्दा पनि कोरोना नफैलिने । कोरोनाले पनि नेता र व्यापारी चिन्दो रैछ ।
व्यापारीहरुले पनि सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड बेवास्ता गरेको छन् । हुन त ठूलोले जे गर्छन् सानाले त्यसकै सिखो गर्छन् । सरकारी कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता र कमिशनभन्दा अरु केही पनि चाहिदैन् । जनता मरुन् कि बाँचुन् सरकारी कर्मचारीलाई केही मतलब नै छैनन। कोरोनाको कारणले सरकारी कर्मचारी मालामाल भएका छन् । काम नै नगरि तलबभत्ता पनि पाए । सरकारी कर्मचारीलाई त कोरोना दशै मनाए जत्तिकै भयो ।
२०७८ साउन २७ गतेबाट २०७८ भदौ ५ गतेसम्म राति ८ बजेपछि बिहान ६ बजेसम्म सार्वजनिक र निजी गाडीहरु चल्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यो निर्णयले पनि कोरोना केही हदसम्म कम गर्न निकै मद्दत पुप्याएको थियो । किनभने राति ८ बज्नुभन्दा अगाडि नै सबै आफ्नो घर पुगिसक्थे । रेष्टुरेन्ट, होटलहरु ७ बजे नै बन्द भइसक्थे । जसको कारणले सरकारलाई पनि कोरोना नियन्त्रणमा केही मद्दत पुगेको थियो ।
राति ८ बजेपछि गाडी चल्नमा प्रतिबन्ध लगाएको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको कोरोना चार्टमा पनि कोरोना संक्रमितको दरमा कमी आएको थियो । बेलृका फुट्पाथमा हिड्नेहरुको संख्यामा पनि कमी आएको थियो । बाटोमा मानिसहरुको चहलपहलमा कमी आएको थियो ।
तर सरकारले राति गाडी गुड्न लगाएको प्रतिबन्ध हटाएसंगै कोरोना पनि पहिल्यै कै स्थितिमा आएको छ । मानिसको भीड पनि उत्तिकै बढेको छ । मानिसहरुले कोरोना हराइसकेको जस्तो व्यवहार गरेको छन् । यसले झन् भयानक रुप देखाउने भनाइ विज्ञहरुको छ ।
केही दिनयता उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको दरमा उकालो लागेको छ । काठमाडौँमा दैनिक चार, पाँच सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिरहेको छ । सक्रिय संक्रमित घट्नुपर्ने ठाँउमा झन् बढिरहेको छ । तैपनि कोरोनाको वास्ता कसैले गरेको छैन् । कोरोना केही होइन् भन्दै मानिसहरु मग्नमस्त भएर बसेको छन् ।